Guqulela la MaPhepha phambi kokwabela ukuyokufunda kwelinye ilizwe ngo-2022
Guqulela la MaPhepha phambi kokwabela ukuyofunda kwelinye ilizwe
Ngaba ibisoloko iliphupha lakho ukufunda phesheya? Ukhona ekugqibeleni; ulungiselela ukushiya izifundo zakho phesheya. Sele unomdla wokuhamba kwaye ulindele ukuba yonke into ibe yimpepho.
Ewe, ayiyompepho yonke ngaphandle kokuba ulungiselele kakuhle kwaye uxhotyiselwe ubomi baphesheya. Njengomfundi wamazwe aphesheya, uya kufuna amaxwebhu amaninzi ukuze ufunde phesheya.
Incwadi yerekhodi yesikolo
Ikhadi leSazisi leSizwe (ID)
I-Curriculum Vitae (CV) okanye uqalise kwakhona
Incwadi yengxelo yosapho
Ezi ziincwadi ezirekhoda imbali yakho yokusebenza kwezemfundo kule minyaka idlulileyo. Ezi rekhodi zihlala zisuka kwisikolo samabanga aphantsi ukuya kwisikolo samabanga aphakamileyo imfundo. Iikomiti zifuna ezi rekhodi phesheya ukuze ziqinisekise isicelo sakho sokujoyina iidyunivesithi kwaye ufumane imali yokufunda.
Kubalulekile ukuziguqulela ezi zinto ukuba iyunivesiti ofaka isicelo kuyo ikwisizwe esingabelananga ngolwimi olufana nolwakho lwesizwe nolwaseburhulumenteni.
Ezi ziingxelo zeerekhodi zamabakala eyunivesithi. Ukuba uya phesheya uyokufundela isidanga se-masters, umbhalo uya kuba luncedo. Imiqulu kunye neencwadi zeerekhodi zesikolo zonke zisebenza ngokufanayo ngaphandle kwamanqanaba ahlukeneyo emfundo ephakamileyo. Ukuguqulela okushicilelweyo kuya kuhamba indlela ende ekuphuculeni inkqubo yakho yesicelo phesheya.
Eli khadi likuchonga njengommi welizwe elithile. Xa umntu sele emdala, afake isicelo sesazisi sesizwe. Kufuneka uluguqulele olu xwebhu phambi kokuba uhambe kwelinye ilizwe.
Nangona isatifikethi sokuzalwa senza umsebenzi ophantse ufane nekhadi lesazisi sesizwe, sibalulekile ngokulinganayo. Ngokwesiqhelo kunikwa iintsuku okanye iinyanga nje ezimbalwa emva kokuzalwa. Isatifikethi sokuzalwa siza luncedo ukuba ungaphantsi kweminyaka eyi-18 kwaye uya kufunda phesheya. Ezinye iidyunivesithi ziyakucela isiqinisekiso sokuzalwa ukuba awufanelekanga ukwenza isicelo sesazisi.
Ezi zezo naziphi na ezinye iintlobo zezatifikethi ozifumeneyo, ezinjengezidanga kunye neediploma. Ezi ziyafuneka ukuba ufuna ukuqhubela phambili eyakho Izifundo zaphesheya.
Kuya kuba yimfuneko ukuguqulela oku ngexesha lenkqubo yakho yesicelo, njengoko ziqhele ukuba yimfuneko kwiibhodi ezininzi zokwamkelwa.
Ezi ngokubanzi zivela kwi-faculty, oonjingalwazi, kunye nabaphathi abathetha ngezakhono zakho, amava kunye nempumelelo. Ibhodi yolwamkelo inokufumana umbono wokuba ubomi bakho bunjani kwaye ungubani. Ukuba unazo naziphi na iingcebiso zokufunda eyunivesithi phesheya, yiba neengcebiso (ii) eziguqulelwe.
Ukufumana ingqiqo ephangaleleyo kuzo zombini ixesha lakho lobuchwephesha kunye nezemfundo, i-resume iza luncedo. Olu xwebhu luqaqambisa;
Qinisekisa ukuba isexesheni kwaye ifanelekile phambi kokuba uyingenise ukuze iguqulelwe kuyo iinkampani eziguqulela amaxwebhu kwaye kamva ukungeniswa.
Iiyunivesithi ezininzi zifuna abafaki zicelo ukuba bangenise izincoko zokufunda phesheya. Oku kusetyenziselwa ukungqina ubunzulu beminqweno yakho yokufunda phesheya. Isincoko sikunceda wenze umbono olungileyo wokuqala.
Le yincwadi echonga amalungu osapho lwakho. Idla ngokukufanisa nentsapho, abazali bakho, ukuba akutshatanga. Izibini ezitshatileyo zineencwadi zazo zeentsapho.
Abafundi baye bazi kakuhle ukuba ngawaphi amaxwebhu ebekufanele ukuba bawaguqulele ukulungiselela izifundo zabo phesheya. Qinisekisa ukuba unawo onke amanye amaxwebhu okuhamba afana nelakho i-visa kunye nepasipoti ulungile, njengoko ufumana ezi ezinye ziguqulelwe kwiilwimi ezifunekayo zasemzini.
U-Elizabeth Baldridge ngumguquleli kunye notitshala weSpanish. Usebenze ekuguquleleni kumaziko amaninzi eshishini njengegosa lonxibelelwano. Ufundisa iSpanish kubantwana abanomdla wokufunda ulwimi.
Eyona ndlela ikhawulezayo yokufumana iTranscript evela kwiDyunivesithi yaseCalifornia, eSan Diego
Iidyunivesithi ezili-15 eziphezulu zamaKristu eMelika
Izikolo ezili-13 eziGqwesileyo ezingezizo i-Ivy League ze-Pre Med
Ukufundwa kwamanye amazwe Ukulungiselela: Indlela eQinisekisiweyo yoGuqulelo enokuthi isuse imiqobo kuLwimi
I-7 yokuGuqulela eziGqwesileyo kunye neeDikshinari zaBafundi
Post Previous:Izikolo ezili-9 zokuCoca iiNja eFlorida
Okulandelayo Post:Uluhlu lweePhepha zokuLungisa ngaphambi kokuya kwiKholeji yangaphandle